Turn On Ideas: August 2010
Posted by TURN-ON-IDEAS at Sunday, August 29, 2010 10 comments:
မပြန်ခင် ၂လလောက်တည်းက ပြင်ဆင်နေခဲ့တာ။
အိမ်အတွက် လက်ဆောင်လေးတွေဝယ်၊ ခင်ရာမင်ရာတွေ ပေးဖို့လဲဝယ်။
(ဝယ်)၃ အကုန် အကုန် တကယ်ကို ကုန်တာပဲ၊ မယုံရင် A/C Summary ပြမယ်။
မလုပ်ချင်ဆုံး အလုပ်၁ခုကိုလဲ မလုပ်မနေရမို့ လုပ်ရပါမယ်။
မနက်စောစော ဝေလီဝေလင်းကတည်းက အိပ်ရာကထ။
ကဲ... ရောက်ပြီဗျာ... (အဲဒိကဝန်ထမ်းတွေကို ပြောတာမဟုတ်)
အကြမ်းစာရွက်၁ရွက်ပေါ်မှာ နာမည်ရေး၊ ပြီးတော့ ဆိုင်၁ဆိုင်မှာ ဗိုက်သွားဖြည့်။
အင်း 1hourplus! ဒီအချိန်ကို “ဖြုန်းရင် ကောင်းမလား? သုံးရင်ကောင်းမလား?”
ငါ့မလဲ... သိပြီးသား ကိစ္စကိုများ။
တကယ်ဆို ၁ခုခုလုပ်ဖို့ ကြိုတင်စဉ်းစားထားခဲ့သင့်တာ။
အခုတော့ လတ်ယားလတ်ယားနဲ့ လမ်းပေါ်မှာ...
စင်ကာပူမှာ အချိန်တွေ သိပ်ရှားတယ်ဆို။
အဲလို ပြောကြတာ ဘယ်သူတွေတုန်းးးးးးး
အခု ဒီမှာ အချိန်တွေပိုနေတယ်ဗျို့
“ကျက်သရေရှိအောင်နေပါကွာ... ဘာမှ တောင်တောင်အီအီတွေ တွေးမနေနဲ့၊
စိတ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကြည်ကြည်လင်လင်လေးထား”
ဒီလို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆုံးမလိုက်မိသေးတယ်။
စင်ကာပူ အနောက်ဘက်ခြမ်းကနေ နာမည်ကြီး orchardလမ်းပေါ်မှာ မနက်ဝေလီဝေလင်းကလေး လမ်းလာလျှောက်နိုင်တာ တော်ရုံ ဝီရိယနဲ့ ဘယ်ရလိမ့်မတုန်း...
အခုလို အချိန်မျိုးမှာ လူကောစိတ်ကော၊ ကျန်းမာအောင်လုပ်ထား။
ပေါက်တတ်ကရ ရယ်စရာတွေတွေး၊ ဓာတ်ပုံတွေလျှောက်ရိုက်။
စိတ်ပျော်စေမယ့်၊ စိတ်ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်စေမယ့် အကြောင်းလေးတွေ တွေးနေ၊ လုပ်နေ...
ဖြစ်နိုင်ရင် တရားနှလုံးသွင်းထားနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲ။
သိတယ်ဟုတ်!!! မင်း စိတ်ညစ်ရတော့မှာ...
စိတ်တို၊ စိတ်ရှုပ်၊ စိတ်ပျက်၊ စိတ်နာစရာတွေ။
ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်ပြန်ဖို့ရယ်၊ ဟိုရောက်ရင် ဘာတွေလုပ်မယ်၊ ဘာတွေစားမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ စိတ်ကလေးကို ပျော်အောင်ထားလိုက်ပါ။
ပြုံး ပြုံး.. ပြုံးထား... ထပ်ပြုံး....အဲ ဟုတ်ပြီ ဟုတ်ပြီ.. ဟုတ်ပြီ... မရပ်လိုက်နဲ့နော်...
အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ခဲ့ရတဲ့ သူတို့တွေလေ။
လာကြတဲ့ လူတွေရဲ့ပုံစံတွေကတော့ အစုံပါပဲ။
ညတည်းက လာစောင့်နေတဲ့ သူတွေ...
မထူးပါဘူးကွာ တနေကုန်လဲ ကုန်ပါစေတော့ဆိုပြီး အိပ်ရေးဝဝအိပ်ခဲ့တဲ့သူတွေ...
ထူးဆန်းတာက သူတို့အားလုံး ပုံစံ၁ခုတည်းဖြစ်နေကြတာ။
ဟင် ဒါဆို ငါကရော???
စိတ်မှန်ထဲ ၁ချက်ကြည့်လိုက်တယ်.. အော.. ငါရောပဲကိုးးးးးး
အခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ လူတွေလူတွေ ပြည့်သိပ်ကျပ်ညပ်နေလိုက်သမှ...
ဒါတွေက အလွမ်းပြေလား၊ အလွမ်းမပြေလား...
“အစ်ကို အခု ဟိုလူတွေ ဖြည့်နေကြတာ ကျနော်တို့ဖြည့်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းစာရွက်လဲ မဟုတ်ဘူး”
“သူတို့ရောက်လာကြတော့ နောက်ထပ်စာရွက်အသစ်၁ရွက် ထပ်ချပေးတယ်၊ ပြောတာကတော့ စာရွက်၂ရွက် ပြိုင်တူခေါ်မယ်တဲ့”
“ဟင် ဂလိုလား? ဘယ်လိုကြီးတုန်း!!!”
“ဒါဆို ကျနော့်အလှည့်က တကယ်ကြာသင့်တာထက် ၂ဆပိုကြာတော့မှာပေါ့..”
“ဟင်းးးးး တော်တော့်ကို စည်းမရှိကမ်းမရှိ”
“ဘယ်လိုဟာတွေနဲ့ ဒီဘဝမှာ လာကြုံတွေ့နေရတာပါလိမ့်...”
အဲ့လို ခံစားနေရတာတွေကို စိတ်ထဲမှာ အားပါးတရ မြည်တွန်တောက်တီးပြီးတော့...
သရက်ပင်အောက် သွားထိုင် ထိုင် ထိုင်
အဖော်အပေါင်းနဲ့ လာတယ်ဆိုတာ အခုလက်တွေ့ပဲ...
ဟင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး... ပြောကို မပြောချင်တော့တာ...
ကဲ “ဘယ်မှာ နားခိုမလဲ?”
မှုန်တေတေမျက်နှာတွေနဲ့ သူတို့တွေ နည်းနည်းပျော်သွားပုံပဲ။
“အထဲမှာ အိုက်စပ်နေတာပဲ၊ တော်သေးတယ် မိုးရွာလို့...”
“နင်ကလဲ အပြင်မှာစောင့်နေတဲ့သူတွေ သနားပါတယ်”
“ဆောရီးပါ... ငါလဲ အိုက်လွန်းလို့ ရုတ်တရက် ပြောလိုက်တာ...”
ကိုxxx မxxx ဦးxxx ဒေါ်xxx...xxxx....
စိတ်တွေလေးပြီး ပင်ပန်းနေတဲ့ပုံပေါ်တဲ့ ခပ်နွမ်းနွမ်း အစ်ကိုတစ်ယောက်ရဲ့ အော်သံကြားလိုက်ရတယ်။
“မင်းက သက်တမ်းတိုးနဲ့ အခွန်၅နှစ်စာ”
“ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော့်မှာ ၂နှစ်စာပေးဖို့လောက်ပဲ ငွေကျန်တော့လို့ပါ”
“မရဘူး၊ သက်တမ်းတိုးမယ်ဆို အနည်းဆုံး အခွန်က၃နှစ်ခွဲစာဆောင်ရမယ်၊ ပြီးတော့ မင်းက အခွန်ကိုလည်း နည်းပြီးဆောင်ချင်သေးတယ်”
“အမေနေမကောင်းတာ တော်တော်ကြာနေပြီ၊ မပြန်မှ ပိုက်ဆံပိုစုမိမှာမို့ မပြန်တာနဲ့ ၅နှစ်တောင်ဖြစ်သွားရတာ... အခု မပြန်လို့မဖြစ်တော့လို့ပါ”
“ဒါဆိုရင် ၁နှစ်စာ ထပ်ပေး၊ ၃နှစ်စာတော့ ဆောင်သွား”
“မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ... ကျနော့်မှာ ရှိတာ အဲဒါအကုန်ပဲ မို့ပါ၊ အမေမသေခင်လေး တွေ့သွားချင်သေးလို့ ကူညီပါ”
“ခက်တယ်ကွာ... ငါတို့က ဘယ်လိုယုံရမှာလဲ တစ်ယောက်ကိုလုပ်ပေးလိုက်ရင် နောက်တစ်ယောက်ကလဲ ဒီအချိုးမျိုး လုပ်လာအုံးမယ်”
“ကျနော့်မိန်းမ ရေးပေးလိုက်တဲ့ စာယူလာပါတယ်”
ဒါမျိုးတွေ မြင်နေကြားနေရတဲ့ အရပ်က အမြန်ဆုံးထွက်ပြေးပါရစေ။
ငါ့နာမည် မြန်မြန်ခေါ်ပါတော့... ပိုက်ပိုက်ပေးချင်လှပြီ။
♫♫..ဒီကစောင့်နေသူ အိုးအို ဒီကစောင့်နေသူ..♫♫
♫♫..ကြာတယ်၊ ကြာတယ်၊ မြန်မြန်ခေါ်ကွာ (ခေါ်ပြီ ခေါ်ပြီ)၂..♫♫
ဒီကောင်ကွာ... သီချင်းတောင်ဆိုနေနိုင်သေးတယ်လို့တော့ မထင်ကြပါနဲ့။
စိတ်တွေညစ်၊ စိတ်တွေရှုပ်လာရင် လက်တလောဖြစ်နေတာတွေကို ပေါ့စေလိုတဲ့ သဘောမျိုးဖြစ်အောင် သီချင်းတွေအော်ဆိုတတ်ကြသလိုမျိုးပါ။
ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း မတရားလုပ်နေကြတဲ့ ခုနက မြင်ကွင်းမျိုးကြောင့် အလိပ်လိုက်တက်လာတဲ့ ဒေါသတွေကို မျိုသိပ်ထားရတာ ခါးသီးလိုက်တာ။
လက်သီးကို တင်းနေအောင်ဆုပ်၊ အံကိုကြိတ်ထားရင်းကနေ လေပူတွေ ခဏခဏမှုတ်ထုတ်နေရတယ်။
ငါဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်ပါလားဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း မကျေနပ်သလိုကြီး ဖြစ်မိသေးတယ်။
အဲဒိနေ့က စိတ်တွေ ပင်ပန်းလိုက်တာ...
ကျနော် အဲ့အစ်ကိုကို ယုံတယ်...သူ့ပုံစံက တော်တော်ရိုးရိုးအေးအေးကြီးပါ။
အခုကိစ္စအဆင်မပြေခဲ့ရင် ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ သူ့မှာ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်နေတာ။
တကယ်ကို ကြေကွဲဝမ်းနည်းနေတာ အရမ်းသိသာတယ်။
ဒါတွေကို မမြင်နိုင်လောက်အောင်များ ဖြစ်နေကြတာ၊
ဒီဟာတွေ လူတွေမှ ဟုတ်ပါလေစ...
“အင်း ကုန်တော့မယ်၊ ကုန်တော့မယ်”ဆိုပြီး တွေးလိုက်
“ဒီပိုက်ဆံလေးသာ အမေ့အတွက်ဆိုရင်၊ အမေတော်တော် သုံးရမှာ”ဆိုပြီး မချိတင်ကဲ ဖြစ်လိုက်
“မင်းတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး” သီချင်းကို တိုးတိုးလေး ညည်းနေလိုက်တယ်။
သူများတွေကြည့်တော့လည်း ကိုယ့်လိုပါပဲလေ...လို့ စိတ်ဖြေရပြန်တယ်။
ဒါကြောင့် သီချင်းတွေ လျှောက်ညည်းနေမိတာပါ။
တချို့များဆို တော်တော့်ကို ကြေကြေကွဲကွဲလေး ဖြစ်နေရှာတဲ့ပုံ။
ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ... ရွာသားတွေက ဓားပြတွေကို ဆပ်ကြေးပေးရတော့မယ့်အခါ... ရွံရွာစက်ဆုပ်နေကြသလို၊ နှမြောတသလဲ ဖြစ်နေကြတာမျိုးလေ...
ကျနော် ဆပ်ကြေးပေး အဲဟုတ်ပါဘူး... အခွန်ဆောင်ရတော့မယ်အလှည့်။
“(ဟင် လေသံကလဲမာပ... ငါပဲ သူ့သမီးကို ငန်းနေသလို၊ သူ့ဆီမှာ အကြွေးယူထားသလိုလို၊ ဒါမှမဟုတ် အကြွေးယူမလို့ လာသလိုလို...)
(အော် ငါတို့က အပြစ်ကို သိတဲ့ သူတွေပဲ၊ သိရင် သိတဲ့ သူတွေက ရှောင်ရမယ်လေ)”
“ဟဲ့ မေးနေတာ ဖြေအုံးလေ”
“အော် ဟုတ်ကဲ့၊ ကျနော်က ၁နှစ်စာ အခွန်ဆောင်မယ်၊ သက်တမ်းတိုးမယ်”
“၁နှစ်စာ အခွန်က xxx၊ သက်တမ်းတိုးတာက ၃၀၀”
♫♫..ဒီကစောင့်နေသူ၊ အိုးအို ဒီကစောင့်နေသူ..♫♫
အခု ကျနော် ပြောခဲ့သမျှတွေကို စင်ကာပူက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
ဒီပို့စ်ရဲ့ အဓိက ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာက...
“ငါအခု အခွန်ဆောင်လိုက်ရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေသာ ငါ့အမေရရင်”ဆိုတာပါပဲ။
ကံတရားက ကျနော့်ကို မျက်နှာသာပေးပါတယ်။
ကျနော်ပေးလိုက်တဲ့ ပိုက်ပိုက်ထဲက တချို့ကို ကျနော်ပြန်ရဖို့ အကြောင်းရယ်ဖန်လာတယ်။
ကျနော့်ကို collectionအတွက် ပြန်ခေါ်ပြီ။
“ဒီမှာ receipt၊ passportနဲ့ SGD300”
အဲ ဒါ ပဲ!!!
တကယ်က ကျနော်ပေးလိုက်တာ အတိအကျပဲ။
သူတို့ပြန်အမ်းတဲ့ ဒေါ်လာ၃၀၀က သက်တမ်းတိုးဖို့ပေးခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံ။
ကျနော် ခဏ အူကြောင်ကြောင်ပုံစံလေး ဖြစ်သွားတယ်။
ငါ့passport သက်တမ်းမတိုးပေးလိုက်တာလားလို့ ရိုးရိုးလေးပဲ တွေးခဲ့မိပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ passportစာအုပ်ကို နေရာမှာတင်ပဲ စစ်ဖို့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။
ဟင်... သက်တမ်းလည်း တိုးပေးထားပါလား... ဒါဆိုရင်..........................
ခဏလေးမှ တကယ့်ကို ခဏလေးပါ။
ကျနော် အဲဒိနေရာမှာ ဆက်ပြီး ရပ်နေမိတာက ကျနော့်အမှား။
ဒါပေမယ့် သေချာချင်လို့ သက်တမ်းတိုးထားလား စစ်တာပါ။
ကျနော် အဲဒိလို အူတိအူကြောင်လေးဖြစ်နေတဲ့ ခဏကို မြင်ဖြစ်အောင်မြင်တယ်။
ပြီးတော့ right actionကို အဲဒိမိန်းမကြီး လုပ်လိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။
“မင်းက စာအုပ်သက်တမ်းတိုးလဲ လုပ်တာလား”
ကျနော်ကလဲ “ဟုတ်ကဲ့”လို့ အမှန်အတိုင်းပဲ ဖြေလိုက်မိတယ်...
“ဒါဆိုရင် ဒီငွေ၃၀၀က ပြန်အမ်းစရာ မလိုဘူးပေါ့”
“ဟုတ်ကဲ့ ပြန်အမ်းစရာ မလိုဘူး”လို့ “ပြန်ဖြေလိုက်မိပြန်တယ်”
ဒါနဲ့ပဲ ခုနက ကျနော့်ကို ပေးခဲ့တဲ့ ငွေ၃၀၀ သူတို့ပြန်ယူသွားကြတယ်ဗျာ...
ဘေးနားက လူတွေဆိုတာ... ကျနော့်ကို သနားသလိုလို အဲ မဟုတ်သေးဘူး...
တကယ်က သူတို့လဲ တစ်ခုခုကို လက်လွှတ်လိုက်ရသလို ခံစားချက်မျိုးနဲ့ ကျနော့်ကို ကြည့်နေကြတယ်...
တချို့များ ဘယ်လိုမှ ရင်ထဲမှာ သိမ်းမထားနိုင်တော့ဘူးနဲ့ တူပါရဲ့။
“မင်းကွာ၊ အခန်းထဲက အမြန်ပြန်ထွက် သွားပါတော့လား”တဲ့။
ကျနော်သာ အခန်းထဲက အမြန်ပြန်ထွက်သွားနိုင်ခဲ့ရင်....
အဲဒိနေ့က ငရဲပြည်ကအပြန် တလမ်းလုံး...ကျနော့်မှာ...
ရင်ထဲ ဟာနေလိုက်တာများ... နှမြောတသဖြစ်နေတာများ... မချိတင်ကဲ ဖြစ်နေတာတွေများ...
ဒီတစ်ပုဒ်ကတော့ ဇာတ်သိမ်းခန်းအတွက် သီချင်းပေါ့ဗျာ...
အလွမ်းဇာတ်သိမ်းလို့ ပြောရမလား... ဇာတ်နာတယ်ဗျာ...
♫♫..♫♫..ငါ့စိတ်တွေ ကသိကအောက်ဖြစ်အောင်၊ မင်းဘယ်လိုလုပ်တာလဲ
ငါ့အတွေးတွေ ကသိကအောက်ဖြစ်အောင်၊ မင်းဘယ်လိုလုပ်တာလဲ
အခုတော့ ငါ့တစ်ယောက်တည်း ခိုးလို့ခုလု ဖြစ်နေတယ်
ဒီအကြောင်းတွေးလိုက်တိုင်း ခိုးလို့ခုလု ဖြစ်နေတယ်..♫♫..♫♫
Posted by TURN-ON-IDEAS at Tuesday, August 24, 2010 8 comments:
“မြကျွန်းညိုညိုနှင့် စပ်လျဉ်း၍...ချစ်သောကမ္ဘာ စွယ်တော်ရိပ်မဟာ”
ဒါ ငါတို့မပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ချစ်သောကမ္ဘာ စွယ်တော်ရိပ်မဟာ
ကျနော် အထင်ကြီးလေးစားရတဲ့ အစ်မတစ်ယောက်ရေးတဲ့ တက္ကသိုလ်နောက်ခံဇာတ်လမ်းတွေ ဖတ်ရတိုင်း...
အစ်မရေးတဲ့စာတွေထဲက တက္ကသိုလ်မြေကို လွမ်းတယ်....(အိမ်သားတစ်ယောက်မဖြစ်ခဲ့ရပေမဲ့ အိမ်သားတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်နဲ့)
ဒီလိုမျိုးစာတွေဖတ်ရတိုင်း အသစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တဲ့ ခံစားချက်တွေအကြောင်း ပြောချင်နေတာကြာပါပြီ...
ဒါပေမယ့် ငါ့မှာလဲ ပြောစရာတွေရှိနေပါတယ်။
သူတို့... သူတို့ရဲ့ စကားတွေခေါ်ဆောင်ရာနောက် မျောပါရင်း ငါရောက်ခဲ့ဖူးတယ်။
ဒီဘဝတွေကို သူစိမ်းတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ပဲ မြင်တွေ့ခံစားရတာကို မကျေနပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
ငါ့ကို သူစိမ်းလို့ မသတ်မှတ်ကြပါနဲ့။
အချိန်တန်ရင် သူတို့လိုဘဝတွေထဲက ဘဝတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ စီးမျော...
ဒီအိပ်မက်ကို လက်တွေ့ဘဝမှာ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်...
ကိုယ့်အလှည့်ရောက်ပါပြီလဲဆိုရော မြို့ပျက်ကြီး၁ခုလို တိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်သွားလိုက်တာ...
ဒီတစ်ကွေ့မှာ အတက်မို့၊ သွက်သွက်လေးနှင်
သြော်... သီဟိုဠ်တော (သန်လျင် GTCကို ရည်ညွှန်းပါသည်။)”
တိမ်စိုင်များလို လေနှင်ရာ ပြိုကွဲတယ်။
မြူမှုန်များလို နေရောင်မှာ ပြယ်လွင့်တယ်..♫♫..♫♫
အိမ်သားတစ်ယောက်လို... ချစ်သောအမိမြန်မာပြည်ကို လွမ်းသည်
အိမ်သားတစ်ယောက်လိုခံစားပြီး... ချစ်သောအမိကျောင်းတော် စွယ်တော်ရိပ်ကို လွမ်းသည်
အနာဂတ်မဲ့နေတဲ့၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ ပျောက်ရှသွားတဲ့ ကူကယ်ရာမဲ့ (ကျွန်တော်အပါအဝင်) ဘဝတွေကို ဆယ်ယူလိုက်သလိုပါပဲ။
အစ်မသက်ဝေ ပြောသလို “ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ” သဘောမျိုးလဲ ဟုတ်တယ်။)
“သူတို့ပြောပြတဲ့ ငါတို့မပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရသော ချစ်သောကမ္ဘာ စွယ်တော်ရိပ်မဟာ”
ဒီကဗျာကို ရခဲ့တဲ့ အစ်မတန်ခူးရဲ့ပို့စ်
(အစ်မတန်ခူးကို ဒီနေရာကနေ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါရစေ၊ ကဗျာရေးသူ ကိုသျှားကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
ကိုသျှားကဗျာကို အစ်မတန်ခူးက ပြန်လည်ဝေမျှပါသည်။
ဒါကို ကျွန်တော်က အစ်မတန်ခူးပို့စ်က ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Posted by TURN-ON-IDEAS at Friday, August 20, 20109comments:
Posted by Nyi Nyi Win
link to original post by Nyi Nyi Win
RIT EE (Singapore)
Announcement: RIT Alumni "Saya Puzaw Pwe"
To all RIT-EE Friends..
SPZP : Saya Puzaw Pwe
RIT : Refers to all "Set Hmu Tekkatho" under various names (RIT, YIT, MIT, YTU, MTU, xTU, etc.)
EE : Refers to all Electrical Engineering related majors (EP, EC, Electronic, etc.)
Here'sagreat opportunity for us to reunite with old friends and give respect to our Saya once again. Mark your calendar: Sunday 19 December 2010.
SPZP-2010 Main Committee and all majors' reps have decided to organize RIT Alumni SPZP & Reunion 2010 in Singapore on 19 Dec. The Main Comm will extend invitation to all Saya/Sayama who taught us in RIT and will sponsor at least fifty (50) Saya/Sayama from various engineering majors, together withanumber of Saya/Sayama who taught common subjects ("minors").
We, EE alumni in Singapore, will join all other majors to participate in the SPZP-2010. The EE alumni group in SG will sponsor eleven (11) senior EE Saya/Sayama and invite them to Singapore to pay our respect.
The 11 Saya/Sayama will be selected based on their seniority and they represent all EE Saya/Sayama in SPZP-2010.
All EE alumni everywhere are kindly requested to contact your nearest Class Reps and make generous contribution, which will be used to cover following SPZP-2010 expenditures:
* to contribute the overall budget of the Main Committee, by pledging to sponsor the expenses to invite 11 EE Saya/Sayama to SG (and pay respect to them in person)
* all remaining funds will be utilized to equally pay respect in absence, all other EE Saya/Sayama, whom we are not be able to invite to SPZP in person.
Tentative List of EE Saya/Sayama to be invited to SG (To be confirmed)
Potential list of senior EE Saya/Sayama (in no particular order):
* Dr U Ba Lwin (Electrical Power Engineering)
* U Myo Kyi (Electronic Engineering)
* U Tin Maung Thein (Electronic Engineering)
* U Sein Maung (Electrical Power Engineering)
* U Ba Myint (Electrical Power Engineering)
* U Moe Aung (Electrical Power Engineering)
* U Khaing Oo (Electronic Engineering)
* Dr. U Win Tin (Electronic Engineering)
* U Kyaw Lwin (Electronic Engineering)
* U Tin Shwe (Electrical Power Engineering)
* Daw Mya Mya Than (Electrical Power Engineering)
* Daw Khin Aye Win (Electrical Power Engineering)
* U Thein Dan (Electrical Power Engineering)
* U Clement Saldhana (Electronic Engineering)
* U Than Lwin (Electronic Engineering)
* Daw Than Than Win (Electrical Power Engineering)
* U Khin Soe (Electronic Engineering)
* U Tin Win (Electrical Power Engineering)
* U Myint Oo (Electronic Engineering)
* U Aung Than (Electrical Power Engineering)
* Daw Khin Ma Ma Soe (Electrical Power Engineering)
* Daw Khin Swe Oo (Electronic Engineering)
* Daw Khin Tint (Electrical Power)
* U Win Khaing Moe (Electronic Engineering)
We, RIT-EE group, will sponsor 11 most senior EE Saya/Sayama from this list and invite to SG for SPZP. We also intend to invite more Saya/Sayama (>11) - depending on the funds raised and sponsorships for Saya/Sayama. Alumni well-wishers are therefore welcome to sponsor one of these, or any other EE Saya/Sayama to be invited to SG (please see Arrangement for Individual Sponsorship, below).
The final confirmed Invited Saya list (could be more than 11) will be decided by the EE Reps based on the latest available information, and will be announced on this website.
Our sincere wish is to be able to invite all EE Saya/Sayama to SG to pay respect in person. However it is neither advisable nor feasible. Therefore, we've decided to sponsor and invite 11 senior Saya/Sayama to represent all EE Saya/Sayama. All remaining funds raised will be used to equally pay respect to all remaining EE Saya/Sayama in Myanmar or elsewhere. The criteria long adopted by the Main Committee will be used to select Saya/Sayama to pay respect to (that is, Saya/Sayama should have at least7years of uninterrupted service).
Arrangement for Individual Sponsorships
We're also pleased to inform youaspecial arrangement by the Main Comm. If any individual alumni/ batch/ group wishes to sponsor any particular EE Saya/Sayama of their Cetana, it is possible to arrange in coordination with the Main Comm. Please contact your batch representative or core EE Reps (see below) for more information.
Designated budget for one Saya/Sayama invited to SG is $1,600. It will cover return airfare, accommodation, dinner ticket, logistics and misc expenses for one person in SG ($1,200), plus allocation toacommon pool ($400) to collectively sponsor some Saya/Sayama from minor subjects.
Main Programme (19 December 2010)
Programme is quite similar to the one we had in SG in 2007. We'll collectively pay respect to all Saya/Sayama at the Burmese Buddhist Temple (Toa Payoh) in the morning. There will beaReunion Dinner at the Orchid Country Club (Yishun) in the evening.
All alumni are warmly invited to attend both the morning and evening events - not to missarare chance to meet old friends and Saya/Sayama from our RIT days. Reunion dinner tickets are available at $75 per pax. Be sure to secure one early to avoidadisappointment. (Note: A portion from each ticket proceeds will go towards Main Comm overall organizing budget.)
EE alumni will also try to arrangeaseparate EE Saya/Alunmi mini-gathering - tentatively on Saturday 18 December - for us to haveachance to meet with our own Saya/Sayama and friends separately. Stay tuned; and visit this page often.
EE Alumni Class Reps (Contact for Fund Raising)
1) Up to 1987: Saya U Moe Aung, Ko Pye Nyunt, Ko Aung Lin (Thiri Mon), Ko Nyi Nyi Lwin (Mawlamyine)
2) 1988/1991: Ko Nyi Nyi Win, Ko Thein Naing
3) 1992: Ma Myo Myat Thi
4) 1993: Ma Soi Lan Khine, Ma Myint Myint Mon
5) 1994: Ma Myo Sandar Khin, Ma Me Me Thant Zin
6) 1995 (1st): Ma Khine Khine Win
7) 1995 (2nd): Ma Kyawt Kyawt Khine
8) 1996: Ko Kyaw Zwa
9) 1998: Ko San Yu Hlaing
10) 2000: Ma Shwe Zin Ma
11) 2001: Ma Thida Soe
12) 2002: Ko Zin Min Latt
13) 2003 (1st): Ko Min Min Zaw
14) 2003 (2nd): Ko Aung Ko Ko Zaw
14) Others: (TBA)
Please contact your nearest reps today to start your contribution. If you wish to get more information or clarification or have any suggestions or comments, please feel free to contact us, as follows. Thank you.
Core EE Reps (on behalf of all EE Alumni in SG)
* Ko Pye Nyunt 9688-4316
* Ko Nyi Nyi Win 9663-3035
* Ko Thein Naing 9144-1071
* Ma Khine Khine Win 9118-3646
* Ma Kyawt Kyawt Khine 9844-6120
* Ko Kyaw Zwa 9457-9409
Posted by Nyi Nyi Win at 9:34 AM
Posted by TURN-ON-IDEAS at Wednesday, August 18, 2010 No comments:
စင်ကာပူရောက် အိမ်လွမ်းသူတစ်ယောက် ခံစားနေရတာတွေ...
♫♫..♫♫..ခိုလှုံရာ အရိပ်နဲ့ လမ်းခွဲထွက် ဒါဟာဘဝရဲ့ခရီးတွေပဲ
ရင်မှာမောပန်းခြင်းနဲ့ ဝဲလှည့်ရင်း ငါအိမ်ကို လွမ်းနေသူ
ကြေကွဲခြင်းနဲ့ ငိုရှိုက်တဲ့ညတွေ ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ
အရောင်ပြောင်းလဲတဲ့ တိမ်တိုက်တွေ သယ်ဆောင်ရာ ခရီးဆက်ဆဲ
အိပ်မပျော်နိုင်တဲ့ ညတိုင်း အတွေးများလည်း
အိမ်အကြောင်းတွေးမိတိုင်း မရိုးနိုင်တဲ့ အလွမ်းတွေက အမြဲ လတ်ဆတ်နေတယ်...
တွေးရင်းနဲ့ လွမ်းလဲ လွမ်းတယ် ပျော်လဲပျော်တယ်..
အတွေးတွေကြောင့် အိမ်ကို ခဏပြန်ရောက်သွားတယ်...
အဲဒီ ခံစားချက်တွေကကို ချစ်စရာကောင်းနေတာ...
ဒါကြောင့်... အမေရဲ့ စက်ချုပ်ခန်းလေးကို မြင်ယောင်ပြီး လွမ်းချင်ပါသေးတယ်...
အဲဒိတုန်းက အဖြစ်လေးတွေ ပြန်ပြောင်း ပြောရင်းပေါ့...
ကဲဗျာ... ဝယ်လာတဲ့ ပိတ်ဖြတ်စ အထုပ်တွေကို ရှင်းလိုက်ရအောင်...
ဒီအထုပ်တွေကို အပြီးထုပ်ပြီး သိမ်းလိုက်လို့ရရင်တော့လဲ လွယ်မှလွယ်၊ တစ်ခါ သိမ်းရုံပဲ။
ဖြတ်စတွေကို ဘယ်လိုပုံစံချုပ်မယ်ဆိုတဲ့ procedureကို အရင်မေးကြည့်ပါတယ်။
၃) နောက်ဆုံး အစင်ရွေးမယ်...
ကဲ...ဒါဆို ဒီprocedureအတိုင်းပဲ သိမ်းတာပေါ့။
အထူစ၊ အပါးစ၊ ဇာစဆိုပြီး ပိတ်အမျိုးအစား၃မျိုးကို basic colors ၄မျိုးပေါ်အခြေခံပြီး (၃*၄=၁၂)အုပ်စုခွဲလိုက်ပါတယ်။
သိမ်းဖို့ကတော့ labelတပ်ပြီး အိတ်ထဲထည့်ထုပ်ပိုးတဲ့နည်းကို မသုံးချင်တော့ဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုတော့... အိတ်တွေထဲမှာ ထည့်ထားရင် အောက်ဘက်မှာရောက်နေတဲ့ ပိတ်စတွေကို မြင်နိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းသွားလိမ့်မယ်။
ခုရှုပ်မှ နောင်ရှင်းမှာမို့၊ အလုပ်လုပ်ရတာလဲ ထိထိရောက်ရောက် လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်အောင်၊ အမှိုက်ပွတာလဲ သက်သာအောင် ကျနော်သေချာစဉ်းစားရပြီပေါ့ဗျာ။
အဲဒိတုန်းက ပလတ်စတစ်အကြည်ပုံးတွေ စသုံးနေကြပြီ။ ဈေးနည်းနည်းတော့ များသေးတယ်။
ကျနော်က ပလတ်စတစ်အဝတ်ခြင်းတွေပဲ သုံးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
အဝတ်စတွေထည့်ထားမှာဆိုတော့ လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေချင်တာပါ၊ အောက်သိုးသိုးအနံ့တွေ မရှိနိုင်အောင်လို့။
အဝတ်ခြင်းက အပေါက်လေးတွေပါတော့ ဘယ်ပိတ်စ ဘယ်နားမှာရှိလဲသိနိုင်သလို၊ လေဝင်လေထွက်လဲကောင်းတယ်လေ။
(အမှန်ကတော့ ဈေးကလဲ ပုံးတွေထက် ပိုသက်သာလို့ပါ။)
ဒီနေရာမှာ မီးဖိုချောင်နဲ့ အိမ်ရဲ့နောက်ဖေးဘက်ကို နည်းနည်းမြင်အောင် ပြောပြချင်ပါတယ်။
အိမ်မကြီးကနေ အုတ်လှေခါးထစ်အသေးလေး၂ခုကို ဆင်းလိုက်ရင် မီးဖိုချောင်ကိုရောက်ပါတယ်။
မီးဖိုချောင်ရဲ့ ခြေရင်းဘက်မှာ တံခါး၁ခုရှိတယ်။ အဲဒိတံခါးကနေထွက်လိုက်ရင် ခြံထဲရောက်ပါတယ်။
မီးဖိုချောင်က ၂၀ပေ x ၇ပေ အကျယ်ပါ။
ခေါင်းရင်းဘက်မှာ kitchen counter ထားပြီး ချက်တယ်ပြုတ်တယ်၊ kitchen counterရဲ့အဆုံး မီးဖိုချောင်ရဲ့အလယ်တည့်တည့်လောက်မှာ ဆေးဖို့ကြောဖို့ ဘေစင်ထားပါတယ်။
မီးဖိုချောင်အဆုံးကနေ အိမ်နောက်ဘက်ခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်းအထိ ၅ပေကျယ်တဲ့မြေကွက်လပ်ရှိပါတယ်။
ရေချိုးခန်းနဲ့အိမ်သာကို အဲဒိ၅ပေအကျယ်မြေနေရာမှာ မီးဖိုချောင်နဲ့တွဲပြီးထုတ်ထားတာ။
ကျန်နေတဲ့ ခေါင်းရင်းဘက်တဝက် (မီးဖိုချောင်ရဲ့နောက်ဘက်) မြေကွက်လပ်မှာတော့ ဗူးပင်၊ ချဉ်ပေါင်ပင်၊ ငှက်ပျောပင်၊ သင်္ဘောပင်စတဲ့ သီးပင်စားပင်တွေစိုက်ထားတယ်။
အရင်က စက်ချုပ်ခန်းရယ်လို့ သီးသန့်မရှိပါဘူး။
အိမ်မကြီးကနေ မီးဖိုချောင်ကိုဆင်းတဲ့ အုတ်လှေခါးထစ်အသေးလေး၂ခုရဲ့ဘေးနဲ့၊ မီးဖိုချောင်ရဲ့ခြေရင်းဖက် ခြံထဲဆင်းတဲ့ တံခါးကြားဟာ အမေကြီးစက်ချုပ်တဲ့နေရာပါ။
ချုပ်စက်၁လုံးနဲ့ ဓားစက်(လို့ခေါ်တယ်ထင်တယ်)၁လုံးရယ်၊ ဘေးမှာ ပလတ်စတစ်အကြည်ပုံး၁ပုံးနဲ့ အဝတ်ခြင်း၂ခု ဒါဟာ အမေကြီးစက်ချုပ်တဲ့နေရာပေါ့။
မီးဖိုချောင်ကြမ်းခင်း(သစ်သားမဟုတ်)ပေါ်မှာ ယိုးဒယားဖျာအကြီးကြီးချပြီး ပိတ်စတွေပုံ၊ ပြီးရင် စိတ်တိုင်းကျ ညှပ်နေတော့တာ...
အဲဒိတုန်းက အမေကြီးက သူဝတ်ဖို့အင်္ကျီရယ်၊ အိမ်အသုံးအဆောင်တွေနဲ့၊ အိမ်နားက ကလေးတွေအတွက်ရယ်ပဲ ပိတ်စညှပ်စရာ ရှိတာလေ။
ဖြတ်စကိစ္စမရှိတော့ အမှိုက်လဲသိပ်မရှုပ်ဘူး၊ သိမ်းစရာပစ္စည်းလဲ ခပ်များများမရှိဘူး။
ပိတ်စတွေကို ဖျာပေါ်မှာပုံ၊ ဖျာပေါ်မှာညှပ်၊ ပြီးရင် ဖျာပေါ်ကအမှိုက်တွေကို အမှိုက်တောင်းထဲထည့်၊ ဖျာသိမ်း...ဒါပဲ။
ကျနော်ကတော့ ဖျာပေါ်မှာထိုင်၊ လက်ဖက်သုတ်စား၊ ရေနွေးကြမ်းပူပူလေးမှုတ်သောက်၊ ပြီးရင် ဘေးကနေလေဖော။
တခါတလေတော့လည်း နေ့လည်ခင်းလျှောက်ရောင်းတဲ့ ကျနော့်အကြိုက် မုန့်ဘိုင်းတောင့်(မုန့်ဘိန်းနောင့်)၊ မုန့်လက်ကောက်၊ အကြော်စုံတို့လို snacks(ဗမာလို အသံမထွက်ချင်လို့:P)တွေ စားရင်းပေါ့။
ကဲအခုတော့... အမှိုက်ရှုပ်မဲ့ ဒီဖြတ်စတွေက အစပြုပေးလိုက်တာ၊ အမေကြီးအတွက် စက်ချုပ်ခန်းလေးဖြစ်လာတော့မယ်။
တကယ်တော့ အစကတည်းက စက်ချုပ်ခန်းကို သီးသန့်ထားချင်ခဲ့တာပါ။
(ဒါမျိုးဆို ကျနော်က သိပ်လက်စွမ်းပြချင်တာ။)
အခုတော့ အခွင့်အရေးကို အသုံးချပြီး စိတ်ကူးကို အကောင်အထည် ဖော်ပစ်လိုက်တာပေါ့။
ရှေ့မှာပြောပြခဲ့သလို... မီးဖိုချောင်ရဲ့ ခြေရင်းဘက်တံခါးကနေထွက်လိုက်ရင် ခြံထဲရောက်ပါတယ်။
အိမ်က ခြေရင်းဖက်မှာ ၁၀ပေလောက် မြေပိုသေးတယ်။ အဲဒိမြေအပိုလေးကိုသုံးပြီး စက်ချုပ်ခန်းလုပ်လိုက်တာ။
ကျနော့်ရဲ့ စိတ်ကူးက မီးဖိုချောင်ခြေရင်းဖက် တံခါးကနေထွက်လိုက်ရင်၊ ခြံထဲမရောက်ပဲ စက်ချုပ်ခန်းထဲရောက်စေချင်တာ။
အရင်အတိုင်း မီးဖိုချောင်ကနေ ခြံထဲရောက်သွားတာမျိုးကိုလဲ သဘောကျတော့၊ စက်ချုပ်ခန်းရဲ့ ခြေရင်းဘက်မှာ တံခါးထပ်လုပ်လိုက်တယ်။
မီးဖိုချောင်ကနေ စက်ချုပ်ခန်းထဲရောက်၊ စက်ချုပ်ခန်းကမှ ခြံထဲဆင်း။
စက်ချုပ်ခန်းဆိုပေမယ့် အိမ်နဲ့တွဲထားတဲ့ ၁၀ပေပတ်လည် အခန်း၁ခန်းစာ အိမ်သေးသေးလေး ၁လုံးပါပဲ။
အခန်း၁ခန်း = နံရံလေးဘက် + တံခါး + ပြတင်းပေါက် + အမိုး (သို့) မျက်နှာကျက် + ကြမ်းခင်း။
“ခြံပတ်လည်ခတ်ထားတဲ့အုတ်တံတိုင်းရဲ့ ခြေရင်းဖက်နံရံ + နောက်ဖေးဘက်နံရံ + မီးဖိုးချောင်ခြေရင်းဘက်နံရံ + တံခါး”
ဒါတွေက စက်ချုပ်ခန်းအတွက် ရှိပြီးသားတွေ။
ဒါကြောင့် စက်ချုပ်ခန်းရဲ့အိမ်ရှေ့ဘက်မျက်နှာစာနံရံနဲ့ ပြတင်းပေါက်လုပ်ပြီးရင် အမေ့စက်ချုပ်ခန်းဖြစ်ပြီ။
အော် မေ့လို့... ခေါင်မိုး၊ ကြမ်းခင်းနဲ့ ခြံထဲဆင်းဖို့ တံခါးလိုသေးတယ်။
နောက်ပြီး အမိုးအတွက်သုံးတဲ့ သွပ်တွေမှာ ၁ချပ်ကို ပလတ်စတစ်သွပ်သုံးခဲ့တယ်။
အခု အမေ့ရဲ့စက်ချုပ်ခန်းလေးဟာ လေဝင်လေထွက်ကောင်းပြီး၊ အလင်းရောင်လဲ လုံလုံလောက်လောက်ရပါပြီ။
ကဲ ဒါဆို... အစမှာ ပြောခဲ့တဲ့ အုပ်စု၁၂စုခွဲထားတဲ့ ပိတ်စတွေကို အခု ပလတ်စတစ်ခြင်း ၁၂ခြင်းထဲ ထည့်ပါမယ်။
ပိတ်စတွေထည့်ထားတဲ့ ခြင်း၁၂ခြင်း၊ အမေကြီးရဲ့ ရှိပြီးသား ပလတ်စတစ်ပုံး၁ပုံး၊ အဝတ်ခြင်း၂ခြင်းနဲ့ ချုပ်စက်၂လုံးပေါင်းလိုက်တော့ စက်ချုပ်ခန်းလေးက ကျဉ်းကျုပ်သွားတယ်။
ဒါ့အပြင် အသစ်ထပ်ဝယ်လာတဲ့ ဖြတ်စအိတ်တွေ၊ ရွေးလက်စ အိတ်တဝက်တပျက်တွေကလဲ ရှိသေးတော့၊ မြင်ရတွေ့ရတာ ခေါင်းကိုက်ချင်သလိုလို၊ ဇက်ကြောတက်ချင်သလိုလို...
စာအုပ်စင်လိုမျိုး open shelfတွေ မြင်ဖူးမှာပေါ့။
အိမ်ရဲ့ ၂လမ်းကျော်လောက်မှာ ကုလားတွေပိုင်တဲ့ ခြံအကျယ်ကြီးရှိတယ်။ အဲဒိ ခြံထဲမှာ အဆောက်အဦးအဟောင်းတွေ ဖျက်ထားတဲ့ သစ်တွေကို ပုံထားတာ အများကြီးပဲ။
သူတို့က အဲဒိသစ်အဟောင်းတွေ ပြန်ရောင်းတာလေ။
furnitureတွေအတွက် ကျွန်းကအကောင်းဆုံးပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်းဈေးကလဲ သိတဲ့အတိုင်း...
ကိုယ်အသုံးပြုမှာက ခြင်းတင်ဖို့လောက်ပဲလေ။ “ဒါဆို သစ်ရိုင်းပဲ သုံးလေ” ဆိုတော့.. ဒီလိုတော့လဲ မဟုတ်သေးဘူး။
ကျနော်က ပေါ+ချောင်+ကောင်းရှာတာ ဘယ်လိုဝါသနာကြီးမှန်းမသိ။
ကြုံတုန်းလေးပြောပြရအုံးမယ်... စင်ကာပူမှာ ပေါချောင်ကောင်းတွေ သိပ်ဝယ်လို့ကောင်းတာ။ ကျနော်နဲ့တော့ ကွတ်တိပဲ။
အရေးတကြီး မလိုရင် ဘယ်တော့မှ NEW ARRIVALပစ္စည်းတွေကို ဈေးကြီးကြီးပေး မဝယ်ပေါင်။
အဲဒိကုလားဆိုင်မှာ ရှေးဟောင်းရုံးအဆောက်အဦးတွေကို ဖျက်ထားတဲ့ သစ်သားအကောင်းစားတွေရှိတယ်။
စက်ချုပ်ခန်းဆောက်ပေးတဲ့ လက်သမားကိုခေါ်သွားပြီး၊ သစ်အဟောင်းတွေထဲက သစ်ကောင်းကောင်း ပျဉ်ကောင်းကောင်းထူထူတွေရှာခိုင်းတယ်။
လက်သမားရှာပြီးရွေးထားတဲ့ သစ်တွေထဲကမှ ခြင်း၁၂ခြင်းတင်ထားမယ့် စင်(open shelf)အတွက် လုံလောက်မဲ့ သစ်ပမာဏကို ဝယ်တယ်။
စင်က ခြင်း၁၂ခြင်းတင်ထားဖို့ အဆင့်၃ဆင့်ပါတဲ့ နံရံကပ်စင်ပါ။ ၁ဆင့်စီမှာ ခြင်း၎ခြင်းတင်ထားနိုင်ပါတယ်။
အလယ်၂တန်းအတွက် သစ်သားထူထူ၂ပြား၊ ပိုပြီးတောင့်သွားအောင် သစ်သား၁ပြားစီအောက်မှာ '၁လက္မခွဲ-၁မတ်'အရွယ် သစ်သားကျစ်ကျစ်၁တန်းစီခံပေး၊ ဘောင်ကွပ်ဖို့ သစ်သားထူထူ၎ပြား၊ ပြီးတော့ အနက်ရောင်သစ်စေးသုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ဒါပါပဲ။
အပေါ်ဆုံးအဆင့်ကခြင်းတွေကို အောက်ချလို့အဆင်ပြေပေမဲ့၊ အပေါ်ပြန်တင်ဖို့ကျတော့ နဲနဲခက်မယ်။
(ပိတ်စထည့်ထားတဲ့ ခြင်းက သိပ်မလေးပေမဲ့)
အဲဒိအတွက်တော့ ညဘက် ကျနော်စက်ချုပ်ခန်း ရှင်းလင်းရေးလုပ်မှ ပြန်တင်ဖို့ မှာထားရတယ်။
ကဲ ခြင်း၁၂ခြင်းတော့ နေရာကျသွားပြီ။
အသစ်ဝယ်ထားတဲ့အိတ်တွေ၊ ရွေးလက်စ အိတ်တွေနဲ့၊ ချုပ်ပြီးသားလိုက်ကာတွေ ထည့်ထားဖို့အတွက်တော့ ဗီဒိုအဟောင်းတလုံးဝယ်လိုက်တယ်။ အဲဒိလက်သမားကိုပဲ ကော်ပတ်စားခိုင်း၊ ပေါ်လစ်သုတ်ခိုင်းရတယ်။
ဗီဒိုထဲမှာ ချုပ်ပြီးတဲ့လိုက်ကာတွေထည့်၊ အပေါ်မှာတော့ အိတ်တွေတင်လိုက်ပါတယ်။
နှစ်ယောက်ထိုင် ထိုင်ခုံလေး၁လုံးတောင် အထဲမှာထားလို့ရသွားတယ်။ ဖျာတစ်ချပ် လွတ်လွတ်ကင်းကင်းချထားဖို့ နေရာလွတ်လေးလဲ လုံလုံလောက်လောက်ရှိတယ်။ ဒီစက်ချုပ်ခန်းမှာ အကြိုက်ဆုံးကတော့ ကြမ်းခင်းက သစ်သားကြမ်းခင်း ဖြစ်သွားတာပဲ။
မီးဖိုချောင်ကြမ်းခင်းက သစ်သားမဟုတ်တော့ ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းဘူးလေ။
ပြီးတော့ ဆေးရောင် ကြည်ကြည်ဖျော့ဖျော့လေးသုတ်တယ်၊ ၂ပေ မီးချောင်းတစ်ချောင်းတပ်တယ်။
ကျန်တဲ့ အသေးစား ပြင်ဆင်မှုလေးတွေ ထပ်ဖြည့်လိုက်တဲ့အခါ နေချင့်စဖွယ် စက်ချုပ်ခန်းလေးဖြစ်သွားတော့တာပေါ့....
အမေကြီးတစ်ယောက် စက်ချုပ်ခန်းလေးကို သဘောကျမှကျ။
ဒီစက်ချုပ်ခန်းလေးထဲကို အမေကြီး ဝင်သွားတယ်။
ပြန်ထွက်လာတော့ အိပ်ခန်းတိုင်းအတွက် ချည်(ဇာ)အပွင့်လှလှတွေနဲ့ ခြင်ထောင်တွေ ပါလာတယ်။
“ကဲ မထူးဆန်းဘူးလား”... ဟဲဟဲ စတာ။:P
(ကျနော်အကြိုက်ဆုံး အမေကြီးရဲ့လက်ရာကတော့ ခြင်ထောင်ပါ။)
အိပ်ရာခင်း၊ ခေါင်းအုံးစွပ်... ဒါတွေလဲ “သူ သူ သူပဲ”
နောက်ပြီး ညှပ်ရင်း ညှပ်ရင်းနဲ့ သေးလွန်းသွားတဲ့ ပိတ်စလေးတွေကိုတော့ စားပွဲတွေ ခုံတွေ ဖုန်သုတ်ဖို့ အဝတ်တံမြက်စည်းလေးတွေ၊ ခြေသုတ်ဝတ်တွေ စတဲ့ စတဲ့ အမျိုးမျိုးသော အိမ်အသုံးအဆောင်တွေအပြင်...
ဖျာတွေတောင် ကတ္တီပါစတွေနဲ့အကွပ်လေးတွေ ကွပ်ပစ်လိုက်တဲ့ သူဆိုတဲ့သူဟာ သားရဲ့ချစ်မေမေပါပဲ။
ကလေးဝတ် အင်္ကျီ၊ ဂါဝန်၊ ဘောင်းဘီနဲ့ စကတ်တွေ၊
ခြေသုတ်ဝတ်၊ အဝတ်တံမြက်စည်း၊ ပိတ်စနဲ့ကျစ်တဲ့ကြိုးတွေ လုပ်ပြီး ပေးသင့်တာပေး လှူသင့်တာလှူလုပ်သေးတယ်။
ဖြတ်စတွေနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ စောင်တွေ၊ လိုက်ကာတွေဆိုတာက အဲဒိဖြတ်စတွေကို ပုံစံလှလှလေးတွေပေါ်အောင် လေးထောင့်တွေ၊ အဝိုင်းတွေ၊ အချွှန်လေးတွေညှပ်ပြီး ချုပ်ရတာပါ။
တနေ့တနေ့ အဲဒိပိတ်စလေးတွေကို ညှပ်လိုက် တွဲလိုက်နဲ့ ချုပ်လုပ်နေတာ ဘေးကနေ လက်ဖက်စားရင်းကြည့်နေတဲ့ ကျနော်တောင် ဇက်ကြောတွေတက်ချင်လာတယ်။
ဒါပေမယ့် အမေကြီးကတော့ မျက်စိလဲကောင်း၊ တစ်ခါမှ ဇက်ကြောတက်တယ်လို့ ပြောသံတောင် မကြားမိဘူး။
အခုအချိန်အထိ မျက်မှန်တပ်စရာမလိုဘဲ အပ်ပေါက်ထဲ ချည်ထိုးနိုင်သေးတယ်။
နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးတွေက ဟင်္သာတ၊ ပုသိမ်နဲ့ ရှမ်းပြည်ညောင်ရွှေဘက်တွေမှာ ရှိတယ်။
အဲဒိတွေကိုအလည်သွားတဲ့အခါ အသိမိတ်ဆွေတွေနဲ့ ဆင်းဆင်းရဲရဲရှိတဲ့ ဆွေမျိုးတွေအတွက် ယူသွားတဲ့ လက်ဆောင်တွေကတော့ စားစရာနဲ့ တခြားပစ္စည်းလေးတွေအပြင် သူ့လက်ဖြစ်ကလေးတွေပေါ့ဗျာ။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့သူတွေအတွက် ဖြတ်စတွေကို စိတ်တိုင်းကျ လက်စွမ်းပြထားတဲ့...
စောင်အပါး၊ ဂွမ်းကတ်အဟောင်းတွေ ထည့်ထားတဲ့စောင်အထူတွေ၊
နောက်ပြီး အရမ်းသေးလွန်းသွားတဲ့ ဖြတ်စလေးတွေကို ကြိုးကျစ်ပြီး နွားတွေအတွက် နဖားကြိုးလုပ်ဖို့ ပေးတတ်သေးတယ်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေအတွက် တခြားပစ္စည်းတွေ လှုတဲ့အပြင်၊ သူ့လက်ရာ ခြေသုတ်ဝတ်တွေ၊ လိုက်ကာလှလှတွေလဲ လှူတယ်။
ကလေးတွေအတွက်ကတော့ ဖြတ်စတွေကို ချုပ်ထားတဲ့ အင်္ကျီလှလှတွေ၊ ဂါဝန်လေးတွေ၊ စကတ်တွေ ဘောင်းဘီတွေကို လက်ဆောင်ပေးတယ်။
ကဲ... ဒီလောက်ဆို အမေကြီးတစ်ယောက် ပျော်တပြုံးပြုံးနဲ့ စက်ချုပ်ခန်းထဲမှာ ဘယ်လောက်တောင် ချုပ်လုပ်နေမလဲဆိုတာ မြင်ကြည့်ပေတော့ဗျို့...
ဒါကြောင့် ကျနော်က အမေကြီးရဲ့ စက်ချုပ်ခန်းလေးကို သန့်ရှင်းသပ်ရပ်နေအောင် အမှိုက်ရှင်း၊ လန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ လေကောင်းလေသန့်ရအောင် အပင်လေးတွေ ထားတန်တာထား လုပ်ပေးရတာပါ။
မိဘတွေ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေစဉ်မှာ သူတို့လိုအပ်တာတွေကို ကိုယ်ပေးနိုင်သမျှအကုန်ပေးပြီး ဂရုတစိုက်နဲ့ စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားချင်တယ်...
မိဘနဲ့ပတ်သတ်လာတိုင်း အမြဲဦးစားပေးဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပါ့မယ်...
သောကဝေဒနာတွေနဲ့ မညီတဲ့လမ်းတွေ လျှောက်နေချိန်မှာ..
ရွှေပြည်တော်က အိပ်ရာဝင်တေးတွေနဲ့ မျှော်တိုင်းဝေးမှာ တွေးကြောက်ရင်း
သားရဲ့လက်ရာ အမေ့ရဲ့စက်ချုပ်ခန်းလေး ဒီမှာ...
♫♫..♫♫..ဒီပင်လယ်ကြီးရဲ့ ဟိုးတဖက်ကမ်း ငါလှမ်းရင်း မှန်းမျှော်ဆဲ
ဒီရင်ကို ချည်သောကြိုးတင်းခဲ့ ငါအိမ်ပြန်မရောက်နိုင်သူ..♫♫..♫♫
bonus : အိမ်လွမ်းသူ (ဝိုင်ဝိုင်း)
Posted by TURN-ON-IDEAS at Monday, August 16, 20106comments:
Labels: သားချစ်တဲ့ မေမေ
Posted by TURN-ON-IDEAS at Wednesday, August 11, 20109comments:
"ဘာလုပ်ရရင်ကောင်းမှာလဲ၊ စိတ်တွေရှုပ်ရင်း ရှင်းမရပါလား"
မောဟ = အမှန်ကို မသိမမြင်နိုင်ခြင်း။
ဒုက္ခ = ဆင်းရဲခြင်း။
နိဗ္ဗာန် = ငြိမ်းအေးခြင်းသဘော (ဉာဏ်ပညာ+လုံ့လ၊ ဝီရိယတို့ဖြင့်သာ ရနိုင်သောအရာ)
ဉာဏ်ပညာဖြင့် မောဟကို ပယ်သတ်၊ ဒုက္ခကို သိမြင်ပြီး လုံ့လ၊ ဝီရိယဖြင့် ကျင့်ကြံအားထုတ်မှသာ အေးငြိမ်းရာ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာ။
နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ သေလွန်ပြီးမှသာ ရရှိခံစားနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ပါ။
ပြောနေကျတဲ့ လောကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကို နားလည်သဘောပေါက်မိတာက...
၁) ဒုက္ခကို ဒုက္ခလို့ ပညာဉာဏ်ဖြင့် သိမြင်၊
၂) အဲဒိလို သိမြင်လိုက်တဲ့ ဒုက္ခပေါ်မှာ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေကင်းတဲ့ စိတ်ထားနိုင်တဲ့ တခဏဟာ၊ လောကနိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ တခဏပါပဲ။
၃) ခဏတိုင်းကို ဆက်ကာဆက်ကာ သတိနဲ့နေရင်၊ လောကနိဗ္ဗာန်ကိုလဲ ဆက်ကာဆက်ကာ ရနေနိုင်ပါတယ်။
၄) အဲဒိကနေမှ မမြဲခြင်းတရားဖြစ်တဲ့ အနိစ္စသဘောကို သိမြင်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
စိတ်ကို သတိ၊ ဉာဏ်ပညာဖြင့် ထိန်းကွပ်ခြင်း(စောင့်ထိန်းခြင်း)ကို ဝိပဿနာ အလုပ်လို့ နားလည်ပါတယ်။
"နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောင်ပြုနိုင်ဖို့ ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ရပါမယ်"
(ဒုက္ခကို မြင်မိလိုက်တဲ့တခဏ ရေးမှတ်ထားချင်စိတ်လေးပေါ်လာတာနဲ့၊ ရေးဖြစ်သွားတာပါ။)
"သည်းခံခြင်းသည် အောင်မြင်ခြင်း"ဆိုတာကို သေချာနားမလည်ခဲ့တုန်းက အဓိပ္ပာယ်ကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း မခံစားမိခဲ့ဘူး။
အခုတော့ သတိကပ်မိတိုင်း၊ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကို ထိန်းကွပ်ဖို့၊ အများဆုံးအသုံးပြုဖြစ်နေတဲ့ စိတ်ခွန်အားတွေပေးတဲ့ ဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက်အဖြစ် အသုံးတည့်နေခဲ့ပြီ။
လိုအပ်တာထက် ပိုချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့
--- အိပ်ချင်တဲ့စိတ်ကို သည်းခံ၊
--- စားချင်တဲ့စိတ်ကို သည်းခံ၊
--- သွားချင်တာ၊ နေချင်တာ၊ ...ချင်တာ၊ ...ချင်တာ...တွေကို သည်းခံနိုင်မှ
လောကီချမ်းသာ၊ လောကုတ္တရာချမ်းသာတွေကို ရရှိခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးနေရင်းနဲ့တင်ပဲ စိတ်တွေ ခဏခဏလွတ်နေပြန်တယ်...
အဲဒိလွတ်သွားတဲ့ စိတ်ထဲ ဝင်သွားတဲ့ အတွေးကတော့ "ဘဝရှုပ်ရင် အတွေးတွေရှုပ်မယ်"
အရှုပ်တွေထဲမှာ ရှင်းအောင်နေဖို့ "ရိုးရှင်းလွန်းတဲ့ ဘဝက အကောင်းဆုံးမို့"
Posted by TURN-ON-IDEAS at Monday, August 02, 20107comments:
Labels: သံဝေဂကို အကြွေးမထားနဲ့